RAM BOOSTER FREE DOWNLOAD - MMEMME NYOCHA - 2019
Mgbe ụfọdụ, ọnọdụ nwere ike ịmalite mgbe nnyefe a na-echere ogologo oge apụghị ịbịakwute akpa ego Yandex Ego, ma ọ bụ mgbe ị mejupụtara nguzobe gị na ọnụahịa ị ka na-echeghị ego na akaụntụ gị. Ka anyi gbalịa idozi nsogbu ndia.
Enwegh ego ọ bụla mgbe ị na-akwụghachi ụgwọ
Ọ bụrụ na ị jiri ọnụahịa ahụ mejupụta, mana ego ahụ abịaghị, ya na data niile ị kwupụtara n'ụzọ ziri ezi ma chekwaa ego ahụ, o yikarịrị ka enwere nsogbu na ọnụ. Kpọtụrụ onye nwe ya, kọntaktị kọntaktị ya ga-ebi na nlele ahụ. Ọ bụrụ na ị tụfuru ego, a ga-achọta ozi banyere onye nwe ọnụ ahụ na ngwaọrụ n'onwe ya. Ọ bụrụ na onye nwe ahụ ekwenyela na ezipụ ego, dee akwụkwọ ozi na ọrụ Yandex nkwado.
Enweghi ego iji bia
Nnyefe niile a na-eme na Yandex na-eme n'otu ntabi anya na ọrụ niile dị otú a nwere ike ịdebe. Ọ bụrụ na ị tụfuo mbipute aghụghọ, na nkọwa niile ị kwuru n'ụzọ ziri ezi, ọ ga-ekwe omume na koodu nchedo chebe ya. Onye eziputara ya ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ka ị nweta ego naanị mgbe i mezuru ọrụ ọ bụla. N'ezie, o nwekwara ike ime ka koodu ahụ mehie. N'ọnọdụ ọ bụla, ị ga-achọpụta onye zipụrụ koodu a (ọ bụrụ na ọ bụla).
Hụkwa: Otu esi eme ka ịnyefe ego na Yandex Ego
Ọ bụrụ na ịghọ aghụghọ, biko kpọtụrụ nkwado Yandex.
Site n'ụzọ, iji zere itinye nkọwa ezighi ezi, ị nwere ike izipu kaadị azụmahịa ka onye na-aghaghị iziga ego, nke nwere data gị na ego mbufe. Ị nwere ike ịchọta njikọ na kaadị azụmahịa site na ịpị bọtịnụ akaụntụ gị na akuku aka nri elu nke ihuenyo ahụ.
Anyị na-adụ ọdụ: Otu esi eji ọrụ Yandex Ego
Ọ bụrụ na ịnweta nsogbu ndị dị otú ahụ, ihe kachasị mkpa adịghị atụ ụjọ. N'ọnọdụ ọ bụla, ị nwere ike ịchọta enyemaka nke ndị ọkachamara nkwado nkà na ụzụ.